Lego Marvel 76175 ပင့်ကူ Lair ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပြခန်းအပေါ်တိုက်ခိုက်မှု
Lego Marvel 76175 ပင့်ကူ Lair ပြန်လည်သုံးသပ်အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု
16 / 02 / 2021 18 / 02 / 2021 ခရစ် Wharfe 1912 Views စာ0မှတ်ချက် 75286 အထွေထွေ Grievous ရဲ့ Starfighter, 75288 ကို AT-AT, 76122 Batcave: Clayface ကျူးကျော်မှု, 76175 Spider-Man Spider Lair ကိုတိုက်ခိုက်ပါ, Batman, အစိမ်းရောင် Goblin, Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Marvel, Marvel's Spider-Man, ပတေရုသက Parker, PlayStation, PS4, reviews, Spider-Man, Star Wars, အဆိပ်
Spider-Man သူ့ကိုယ်ပိုင် headqu ကိုရရှိသွားတဲ့artအမှားများ Lego Marvel 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု, ဒါပေမယ့်သူနှင့်အတူအကြံပြုရကျိုးနပ်ဘာမှယူရန်မေ့လျော့။
လျှင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ Spider-Man တစ် Batcave ရှိခဲ့ပါတယ်။ Batcave တွင်ဘတ်စကတ်ဘောကွင်း၊ စကိတ်စီးကွင်း၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းခုံတစ်ခုနှင့်ဝတ်စုံများပြသထားသည့်ကြီးမားသည့်အသစ်စက်စက်ပစ္စည်များနှင့်ကျင့် ၀ တ်နှင့်ညီညွတ်သောထောင်တွင်းအကျဉ်းခန်းများရှိသည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ Lego အဘို့အ Group ၏ရူပါရုံကို 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု.
ကျန်တဲ့တစ်ဝက်ကတော့ Batcave ကိုအပြီးသတ်ရည်မှန်းချက်ရောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ် Lego ဘရုစ်ဝိန်းရဲ့ကံကြမ္မာကိုအိမ်ပြန်ယူဖို့သင့်ကိုအားကစားစရာအဖြစ်နဲ့အားသွင်းနေပါတယ်။ တရား ၀ င်ပုံရိပ်များမှအများစုကိုထုတ်ယူရန် Spidey-sense မလိုအပ်ပါ။ ၇၆၁၇၅ သည်လူ့ဇာတိ၌ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာများကိုသိုမှီးထားသလား။
theme: Marvel အမည်သတ်မှတ်မည် - 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု ဖြန့်ချိ: မတ်လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 69.99 / $ 69.99 / € 79.99 အပိုင်းပိုင်း: 466 အသေးစားပုံများ: 6
Lego: မတ်လ 1
မင်းဘာကြောင့်ဝယ်တာလဲ Lego စုံ? မင်းရဲ့ကလေးတွေဘာကြောင့်တောင်းတာလဲ Lego အခြားပလပ်စတစ်တစ်စုံကိုတပ်ဆင်ထားလား။ အဓိကကွာခြားချက် 75288 ကို AT-AT နှင့် Hasbro ၏စူပါ Deluxe AT-AT Walker တော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကိုအတူတူထားရတယ်။ သင်က၎င်းကိုရေလွှမ်းမိုးနေသော Hoth လွင်ပြင်တစ်လျှောက်လှည့်ရန်သို့မဟုတ်သင်အိမ်တွင်းရှိကြမ်းခင်းနေရာလွတ်ကိုသင်ဖျက်ဆီးနိုင်သောရှုခင်းကိုအစားထိုးရန်သင်ဆဲဆဲရှိသေးသည်၊ သို့သော်မယုံနိုင်လောက်အောင်တန်ဖိုးကိုထပ်တိုးစေသောထိုအချက်မတိုင်မီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးရှိသည်။ သင်ဝယ်ယူပြီးသောအရုပ်။ ပြီးတော့သင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အဲဒါကို ap ယူနိုင်ပါတယ်art ပြီးတော့သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာအားလုံးကိုတည်ဆောက်ပါ။
ဒါကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ် Lego apart အခြားအရုပ်များမှအခြားအရုပ်များမှ, သို့သော်၎င်းသည်အရည်အသွေးမဟုတ်ပါ 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု ပိုင်ဆိုင်အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ သင်သေတ္တာကိုဖွင့်လိုက်ပြီးနံပါတ်လေးအိတ်လေးခုသာထွက်လာချိန် မှစ၍ ပထမနှစ်ခုတွင်အလွန်ကြီးမားသောဒြပ်စင်များပါရှိသည်။ ၂၀၂၁ ၏ဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာသည် Marvel ယခုအချိန်အထိ set အခြေခံအားဖြင့်ကစား၏မျက်နှာသာအတွက်လုံးဝတည်ဆောက်အတွေ့အကြုံကို esche သိရသည်။
ဒါဟာသင်မျှမျှတတတိုင်းနိုင်ကြောင်းဝေဖန်မှုမဟုတ်ပါဘူး Lego အစုံ: သင်၌လုပ်နိုင်ရုံဤမျှလောက်အဆောက်အ ဦး ရှိပါတယ် Star Wars ဥပမာစစ်တိုက်ခြင်း (သို့) ဒီနှစ်ရဲ့တစ်ခုထက်ပိုသောသက်ဆိုင်သောဥပမာတစ်ခုပေးရန် Marvel မက္ကစီ။ သို့သော်ထိုမော်ဒယ်များသည်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်ပေါင် ၁၅ ပေါင်သာရှိသည်။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်, 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု ယူကေတွင်ပေါင် (၆၉.၉၉) ၀ င်ငွေရှိရန်မှာထားသည့်မိန့်ခွန်း။ ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းစျေးနှုန်းအပေါ်ပိုမိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကကြုံတွေ့၏အခွင့်ထူးများအတွက်သင်ပေးဆောင်သောအရာကို၏အခြေအနေတွင်မပါဘဲတည်ဆောက်ရန်ဆွေးနွေးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဒီဟာမင်းရဲ့ပထမဆုံးမဟုတ်ရင် Lego နှစ်များအတွင်းသတ်မှတ်ထားပါက (သင်ပြန်လည်ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်စဉ်းစားပါက၎င်းသည်လုပ်ရန်ဝေးလံသော၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းများရှိသည်) သို့မဟုတ်သင်သေတ္တာပေါ်ရှိ 8+ tag ၏ ballpark အတွင်း၌သင်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုလုံးသည်သင့်ကိုယူလိမ့်မည်။ ဖြည့်စွက်ရန်အကြမ်းဖျင်းတစ်နာရီ။ အိမ်မှာကစားနေသူတွေအတွက်မိနစ် ၆၀ ပဲ။ £ 60 အတွက်။ အဆင်ပြေပါတယ်၊ ဈေးနှုန်းကိုခဏလောက်လျစ်လျူရှုပြီးတည်ဆောက်မှုကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
Spider-Man's lair 2019 ရဲ့နှင့်အတူ DNA ကိုအများကြီးဝေမျှ 76122 Batcave Clayface ကျူးကျော်အကျဉ်းထောင်ထဲရှိအကျဉ်းထောင်များနှင့်မော်တော်ယာဉ်များအထိဗဟိုမျက်နှာပြင်ရှိကွန်ပျူတာ terminal မှသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာအရာအားလုံးကအများကြီးပိုသေးတယ်၊ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ပိုပြီးတော့အငယ်တန်းတယ်။ တစ်ခုတည်းအဆင့်မှာတည်ဆောက်ထားတယ်။ အရွယ်အစားအများစုကိုလက်တစ်ဆုပ်စာbyရာမအင်ဂျင်နီယာကဖန်တီးထားတယ်။arts, နှင့်တပြင်လုံးကိုအရာပဲသူတစ်ဝက်အဖြစ်ဖြတ်ပြီးလာပါတယ်arted ။
အဆိုပါဘတ်စကက်ဘောကွင်းနှင့်စကိတ်စီးခြင်းချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်မှာဆယ်ကျော်သက် Peter Parker နှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုခံစားရသည် Batmanသေစေနိုင်သောပြင်းထန်သောအားကစားရုံနှင့်လက်နက်များပါ ၀ င်သော်လည်း၊
သို့သော်လည်း Goblin ၏ပျံသန်းမှုသည်လျောက်ပတ်သောတည်ဆောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ A-plate တစ်စုံပတ်ပတ်လည်တွင်ကျောက်ချရပ်နားထားသည်။ စတစ်ကာများကိုအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းနေစဉ် (၎င်းတို့သည်ညှိရန်နာကျင်မှုဖြစ်သော်လည်း) ။ ဒါပေမယ့်ဒီဥပမာတွေကအရမ်းနည်းလွန်းလှပြီးတတိယအကြိမ်စဉ်းစားရန်ရုန်းကန်နေရသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာအပြာရင့်2×4အုတ်ကြွပ်များသာဖြစ်သည်။artနက်ရှိုင်းသောနက်ရှိုင်းသောလျှော့စျေးဖြင့်မရရှိလျှင်။
အပြီးသတ်ရလဒ်ကတော့နှိုင်းယှဉ်သေးငယ်တဲ့အစုတခုဖြစ်တယ်။ ဒါကဘာလို့သင်ဘာကြောင့်ဝယ်တာလဲဆိုတာကိုတကယ်မေးခွန်းထုတ်စေလိမ့်မယ်။ ကလေးတွေအတွက်ကစားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါ့အပြင်ဒီအချက်ကဒါကကစားစရာပဲ။ ဒါပေမယ့်ခွဲဖို့လုံလောက်ပါတယ် 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု အားလုံးအခြားကနေ Spider-Man စတိုးဆိုင်စင်ပေါ် stuffing ကစားစရာ? မဖြစ်သင့်ဘူး Lego ပိုပြီးတစ်ခုခုကမ်းလှမ်း ဒါမလုပ်လို့ပဲ။
အကွက်ထဲမှာအသေးအဖွဲခြောက်ခုရှိတယ်၊ အဲဒါကတော်တော်လေးကောင်းတယ် Marvel အစုံ ထို့အပြင်၎င်းတို့အနက်မှ ၃ ခုသည်အသစ်စက်စက်နှင့်သီးသန့်ဖြစ်သည်။ Stealth Spider-Suit ၏ 'Big Time' မူကွဲ Marvel'' s ကို Spider-Man PS4 အတွက် (set ဖော်ပြချက်သည် Pete ၏မော်နီတာအများအပြားတွင် 'PlayStation' ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂိမ်းခလုတ်များမပါရှိပါ)၊ Green Goblin နှင့်အသစ်ထပ်မံစိတ်ဝင်စားစရာ - Peter Parker လူသိများသောဘင် Reilly ဖြစ်ပုံရသော အနီရောင်ပင့်ကူအဖြစ်စကြဝunာ။
၎င်းတို့အားလုံးသည်အလွန်သေးငယ်သောပုံစံများဖြစ်ပြီး Spidey မူကွဲများသည်အမြဲတမ်းကြီးမားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့ထဲမှမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှရောင်းချသူများမသတ်မှတ်ထားပါ။ particularly ဒီစျေးကြီးအစုတခုသို့ bundle သောအခါ, မဟုတ်ရင်အခြေခံအားဖြင့်တိုင်း dep အတွက်ချို့တဲ့artment ။ ကျန်တဲ့အသေးစားလေးပုံတစ်ပုံဟာ filler လို့ထင်ရပါတယ်။ Iron Spider နဲ့ Venom တို့ကိုအရင်ကတွေ့ဖူးပြီးပြီ။ Spider-Man သူ့ဟာသူအတွက် -2021 အသစ်လက်မောင်းပုံနှိပ်ခြင်း, သင်အများကြီးစျေးနှုန်းချိုသာအစုံအတူတူပင်ဇာတ်ကောင်ရဲနိုင်ပါတယ်။ ပုံသဏ္ာန်နှစ်မျိုးရှိသောခြေထောက်များသည်ဤတွင်ရှည်လျားသောလမ်းကိုလျှောက်သွားနိုင်သည် (သက်သေအထောက်အထားအတွက်ဒီမှာနှိပ်ပါ)ဒါပေမယ့်သူကပေါင် ၇၀ ပေးဖို့အများကြီးတောင်းဆိုနေတာပါ။
ဒဏ်ရာကိုစော်ကားရန်ထပ်တိုးရန်၊ မော်နီတာတစ်ခုမှစူပါထူးခြားသည့် ၀ တ်စုံလေးစောင်ကိုရည်ညွှန်းသည် (ပိုမိုကောင်းမွန်သော The Bombastic Bagman ဟုလူသိများ)၊ Peter Parker အား ၀ တ်ဆင်ရန် Reed Richards (သို့မဟုတ် Mr. Fantastic) ကသူ့ကိုထံမှ သူသည် ၀ တ်စုံမပါဘဲအိမ်သို့လွှဲ။ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ထို ၀ တ်စုံ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗားရှင်းသည်ဤနေရာတွင်ပြီးပြည့်စုံသောဖြည့်စွက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးနှင့်တစ်ခုတည်းသော Fantastic Four ၀ တ်စုံကိုပေးသည်။art ကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင်များ၏အတိအကျစိတ်ပျက်စရာအရာမျိုးကဲ့သို့အသံ Lego Group မှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လိမ့်မယ်။
ဤကိစ္စသည်မေးခွန်းထုတ်စရာမရှိလျှင်တောင်မှလူကြမ်းအဖြစ်လူသစ်တစ် ဦး အတွက် Venom ကိုလဲလှယ်ခြင်းသည်လည်းသဘောတူညီမှုကိုချိုမြိန်စေလိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ်ဒီဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်ရင်တောင်ငါတို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ဖူးတဲ့ Green Goblin တောင်မှ ယခုအချိန်၌တန်ဖိုးအနည်းဆုံးနှစ်ခုသာရှိသည် - အနည်းဆုံးသင်ကအခြားတစ်ယောက်ရှိလျှင် Spider-Man အစုံ။ အကယ်၍ ဤအရာသည်သင်၏တစ်ခုတည်းသောတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုပါက၎င်းကိုရင်ဆိုင်ကြပါစို့။ သင်၏ပထမဆုံးငုပ်ရန် Spider-verse တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းများရှိသည်။
ဤသူသည်သင်တို့မြော်လင့်ခြင်းရှိ၏။ အကယ်၍ သင်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဤအဝေးသို့ရောက်နေပါပြီဆိုလျှင်စျေးနှုန်းသည်ပါးရိုက်နေသည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည် 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု နေ့ခင်းဘက်လုယက်မှုတိုတိုဘာမှမခံစားရဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ပြောခဲ့ပြီးပြီ၊ တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ပဲ။
တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်“ စျေးနှုန်းအနိမ့်အမြင့်” နည်းလမ်းဟောင်းကိုသင်မ ၀ ယ်ပါ Lego အစုံ။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်ဒီမှာ ၆၆.၉၉ / ဒေါ်လာ ၆၉.၉၉ / ယူရို ၇၉.၉၉ သာရမယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲဒီအပိုင်းတွေတော်တော်များများဟာတော်တော်လေးကြီးမားပါတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ကနည်းပညာအရသင့်တင့်မျှတတဲ့ပလပ်စတစ်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ၁၀ × ၁၀ sloped ထောင့်အုတ်ကြီးတွေအတွက်သင်တကယ်အသုံးဝင်မလား။ ထိုသူတို့ကတကယ်တော့ကျော်လွန်, ဒီအစုံအတွက်စားပွဲပေါ်မှာမှယူဆောင်ဘာတွေလုပ်နေလဲ artificially ယင်း၏နေဆဲ - ပတျသကျ။ အလှနျသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားဖောင်း?
ရွေးချယ်မှုအရကျွန်ုပ်တို့သည်သေးငယ်သောဒြပ်စင်များကိုပိုမိုအသေးစိတ်ကျသောတည်ဆောက်ရန်တည်ဆောက်ရန်နှင့်ဤကဲ့သို့သောဆောက်လုပ်ရေးကစားစရာနှင့်ဆင်တူသောဆောက်လုပ်ရေးကစားစရာများကိုတည်ဆောက်ရန်ပိုမိုသေးငယ်သောဒြပ်စင်များကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဒါကကုန်ကျစရိတ်ကိုပြောင်းလဲစေမလား။ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်သင်ကအနည်းဆုံးတော့ငွေအတွက်နည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ခံစားမိနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ရပ်တည်အဖြစ်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု ကတစ် ဦး တည်းသောခဲ့လျှင်၎င်း၏ RRP ဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးရှိခံစားရလိမ့်မယ် Lego တည်ရှိမှုအတွက်သတ်မှတ်ထားသည်။ (ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး တည်းသာအခြားတစျခုဖွစျသညျလျှင် 75286 အထွေထွေ Grievous's Starfighter ။
ပေးကမ်း Spider-Man တစ် ဦး lair တစ် ဦး တော်တော်လေးအစိုင်အခဲရဝုဏ်နဲ့တူခံစားရ၏။ Peter Parker သည်နည်းပညာအရအသုံးမဝင်တော့ပါ Spider-Man: ပင့်ကူ - အခန်းငယ်သို့၎င်း၊ Lego နာမည်ကျော်ကာတွန်းရုပ်ရှင်မှထုတ်ယူခြင်းကိုမကြိုက်ကြောင်း Group မှပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ၀ က်ဘ်ဖိနပ်ကိုတပ်ဆင်ထားသောအဓိပ္ပာယ်မဲ့သောယာဉ်များ၏ armada မှကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲမှုကိုပြုလုပ်စေသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, သူက၎င်း၏ကွပ်မျက်အတွက်လုံးဝနီးပါးပျက်ကွက်။
ဒီတစ်ခါလည်းငါတို့မှပိုပြီးရက်ရောကြပြီ 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု တကယ်လို့ပေါင် ၂၅ ဈေးချိုတယ်။ ပေါင် ၄၅ မှာအလွန်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသည်။ particularly box ထဲမှာခြောက် minifigures နှင့်အတူ။ သငျသညျနီးပါးဆင်တူထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ခြင်းသူတို့အားဇာတ်ကောင်ဤမျှလောက်များစွာသောဆင်ခြေနိုင် ဒါပေမယ့်ပေါင် ၆၉.၉၉ နဲ့ရောင်းချဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ၎င်း၏သီးသန့်ဇာတ်ကောင်များထက် ကျော်လွန်၍ ကမ်းလှမ်းရန်မှာကစားစရာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင် (သို့မဟုတ်သင့်ကလေးများ) သည်ကစားစရာတစ်ခုမှလိုအပ်သည်ဆိုပါက၊ Lego အစုံ
ဖြစ်သကဲ့သို့, ဒီစုစုပေါင်း (web-) လွှဲနှင့်လွဲချော်သည်။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့အမိန့်အားဖြင့်ပါဘူး Lego Marvel ငါတို့တစ်စုံတစ်ယောက်မှတစ်ဆင့် ((ဒီဟာဆိုရင်သူတို့တောင်မှ) အစုံလိုက် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Happy Birthday Elizabeth Olsen
Lego Star Wars 75292 Mandalorian Bounty Hunter Transport ကို LEGO.com တွင်မှာယူနိုင်ပါပြီ →